Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » WTM London waxay daaha ka rogtay Sacuudi Carabiya inay tahay Saaxiibka koowaad ee 2021
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Fahd Hamidaddin, Maamulaha Hay'adda Dalxiiska Sacuudiga (STA).
Sacuudi Carabiya ayaa kor u qaadeysa dadaalkeeda caalamiga ah si ay u gaarto 100 milyan oo booqde sanadkii 2030 -ka.
Sacuudi Carabiya ayaa markii ugu horreysay albaabadeeda iyo quluubteeda u furtay dalxiisayaasha firaaqada caalamiga ah bishii Sebtember 2019.
Wadashaqaynta heerka sare leh ee WTM London waxay xaqiijin doontaa in Sucuudiga loo meeleeyo sidii xiddig muhiim u ah caalamka.
Hiigsiga Sucuudiga ee 2030-ka waa qorshe u yaal mustaqbalka dhaqan-dhaqaale ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Sucuudiga, guriga dhabta ah ee Carabiya ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay Saaxiibka koowaad ee WTM London 2021 iyadoo waddanku uu kor u qaadayo dadaallada caalamiga ah si uu u gaaro 100 milyan oo booqde sannadkiiba 2030 -ka.
Bartilmaameedka hammiga leh ayaa qayb ka ah Hiigsiga 2030-ka Sucuudiga, oo ah qorshaha mustaqbalka dhaqan-dhaqaale ee Sacuudi Carabiya, oo loogu talagalay in lagu kala duwo dhaqaalaha dalka lana abuuro warshado dalxiis oo kobcaya.
Iskaashiga heerka sare leh WTM London waxay xaqiijin doontaa in Sacuudigu loo meeleeyo sidii xiddig muhiim u ah caalamka iyo hogaaminta meelaha loo dalxiis tago ee suuqa caalamiga ah.
Fahad Hamidaddin, CEO of the Hay'adda Dalxiiska Sacuudiga (STA), ayuu yiri:
“Annaga iyo wafdigayaga ugu weyn ee wada -hawlgalayaasha, mashaariicda, iyo wakiillada caga -dhigashada ilaa maanta, joogitaankeenna WTM London ee sannadkan ayaa muhiim u ah meelaynta Sucuudiga oo ah mid ka mid ah meelaha waqtiga firaaqada ee ugu cusub ee ciyaartoy waaweyn oo caalami ah. Soo -jeedinta dalxiiska ee Sucuudiga waa mid gaar ah, kala duwan oo aan la ogaan waxaana sugaynaa inaan ku soo dhaweyno booqdayaasha WTM London soo dhaweyntii naloo yaqaannay. ”
“Waxaa naga go’an inaan sii dhisno Sucuudiga sumadda, ballaarinta joogitaankayaga caalamiga ah iyo dhisidda xiriirrada lala -hawlgalayaasha la aamminsan yahay oo muhiim u noqon doona inay naga caawiyaan sidii aan u wadi lahayn beddelidda suuqyadeena ilaha muhiimka ah. ”
Wafdiga Sacuudiga ee WTM London waxay kor u qaadi doontaa oo kaxayn doontaa wacyiga ku saabsan dhaqanka hodanka ah, hidaha, iyo fursadaha dalxiiska ee xiisaha leh. Meesha taambuugga, martida WTM London iyo booqdayaasha waxay fursad u heli doonaan inay sahamiyaan deeqda Sacuudi Carabiya, safar is -dhexgal ah oo ay ku marayaan dhulka lamadegaanka ah iyo dooxooyinka cagaaran, goobaha qadiimiga ah ee qadiimiga ah iyo yaababka Badda Cas.